Power-sharing deal an elitist pact - ZCTU - The Zimbabwean
Power-sharing deal an elitist pact – ZCTU
HARARE - The ZCTU, which gave birth to the MDC nine years ago and remains an ally of the opposition party, has said it will summon prime minister Morgan Tsvangirai to explain why he agreed to the pact with Mugabe.
The union said it rejected the deal because it ignores the will of Zimbabweans as reflected in last March’s elections won by the MDC and Tsvangirai, but would only decide on the next step after meeting Tsvangirai.
The ZCTU said the way forward for Zimbabwe was: All-inclusive dialogue to resolve Zimbabwe ‘s political and economic impasse. Ownership of the dialogue process should rest with the people of Zimbabwe, not just a few politicians, some of them who have been rejected by the electorate.”
The ZCTU and other civic society groups have long said agreement between Zimbabwe’s two largest political parties alone would not end the country’s multi-faceted political and economic crisis and had called for the inclusion of organised civic society, smaller opposition parties and other stakeholders in the power-sharing talks. – ZimOnline